छोराछोरीसँग खुला यौन छलफल गर्नुस् ! |
छोराछोरीसँग खुला यौन छलफल गर्नुस् !
Posted on December 9, 2009 by Yonepal
यौनका विषयमा कुरा गर्न सजिलो छैन । यस विषयमा खुला रूपमा कुरा गर्न सबै लजाउँछन्, डराउँछन् । आमाबाबु पनि छोराछोरीसँग यौनका विषयमा छलफल सुरु गर्न धक मान्छन् । सन्तान पनि बाबुआमाबाट यौनबारेमा बोलिएको सुन्न चाहँदैनन् ।
त्यसैले महत्त्वपूर्ण भए पनि यो विषय कहिल्यै परिवारमा छलफलको विषय बन्दैन । त्यसैले किशोरकिशोरी असुरक्ष्ाित यौनसम्पर्कबाट हुने एचआइभी एड्स र विभिन्न यौन रोगका सिकार भइरहेका छन् । अहिले विश्वमा ‘टिनएज प्रेग्नेन्सी’ -किशोरी गर्भधारण) विकराल समस्याका रूपमा देखापरेको छ । एक अनुसन्धानका अनुसार अमेरिकामा अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई सुरक्षित यौनसम्पर्क, गर्भनिरोधक, एचआइभी तथा विभिन्न सरुवा यौनरोगका बारेमा भन्नुअघि नै ४० प्रतिशत किशोरकिशोरीले यौनसम्पर्क गरिसक्छन् । यो तथ्यांक अत्यन्त चिन्ताजनक भएको विज्ञहरू बताउँछन् । सन्तानसँग सुरक्ष्ाित यौनका बारेमा छलफल गर्ने अभिभावकका किशोरकिशोरीले सुरक्षित यौनसम्पर्क गर्ने र यौनसम्बन्ध राख्न केही ढिलाइ गर्ने गरेको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ । ‘अनुसन्धानले पत्ता लगाएको तथ्य कुनै अनौठो छैन,’ डा. मार्क स्युस्टर भन्छन् । उनी बोस्टनस्थित बालअस्पतालको जनरल पेडियाटि्रस्ट विभागका प्रमुख हुन् । यो अनुसन्धान पेडियाटि्रस्ट जनरलमा प्रकाशित छ । अनुसन्धानले अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीसँग यौनका बारेमा छिटोभन्दा छिटो छलफल गर्न घच्घचाउने विश्वास मार्कले लिएका छन् । अनुसन्धान टोलीले एक सय ४१ परिवारको अध्ययन गरेको थियो । अभिभावक र उनीहरूका १३ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेरका छोराछोरीले यौन र यौनिकतासँग सम्बन्धित २४ विषयका प्र्रश्नको उत्तर दिएका थिए । अध्ययनमा कसरी महिला गर्भवती हुन्छन्, किशोरावस्थामा हुने शारीरिक परिवर्तनदेखि लिएर कन्डम तथा गर्भनिरोधकका विभिन्न साधन कसरी प्रयोग गर्ने र समलैंगिकता के हो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न गरिएको थियो । अनुसन्धानकर्ताले अभिभावक र किशोरकिशोरीले पहिलोपटक यौनको विषयमा छलफलका गरेको बारेमा दुवैलाई छुट्टाछुट्टै प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि किशोरकिशोरीको विभिन्न यौनव्यवहारका बारेमा जानकारी लिइएको थियो । विशेषगरी हात समात्ने वा चुम्बन, हस्तमैथुन वा ओरलसेक्स र यौनसम्पर्कका बारेमा किशोरकिशोरीसँग प्रश्न सोधिएको थियो । किशोरकिशोरीका परिवारको पनि चारपटक सर्वे गरिएको थियो । अध्ययनको सुरुमा, त्यसपछि तीन, ६ र १२ महिनामा सर्वे गरिएको थियो । आफ्ना किशोरकिशोरी सन्तानले ओरलसेक्स वा हस्तमैथुनमा क्रियाशील भइसक्दा पनि आधाभन्दा बढी अभिभावकले यौनबारेमा सन्तानसँग कुरा नगरेको बताएका छन् । ४८ प्रतिशत किशोरीले गर्भनिरोधकको प्रभावकारिता बारेमा अभिभावकसँग कुरा नगरेको बताए । कसैले यौनसम्पर्कका लागि राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने बारेमा अभिभावकसँग कुरा नगरेको ४० प्रतिशत किशोरीले बताएका छन् । अनुसन्धानका अनुसार ७० प्रतिशत किशोरले कसरी कन्डम वा गर्भनिरोधक पद्धति प्रयोग गर्ने बारेमा अभिभावकसँग छलफल गरेका छैनन् । तर, ५० प्रतिशत अभिभावकले आफ्ना किशोर छोरासँग कन्डम प्रयोग गर्ने वा गर्भनिरोधक बारेमा छलफल गरेको बताएका छन् । अभिभावक र किशोरकिशोरीको जवाफमा देखिएको यस भिन्नताले अभिभावक र किशोरकिशोरीले यौन विषयमा गर्ने छलफलमा समस्या भएको स्पष्ट देखाउँछ । ‘धेरै अभिभावकलाई लाग्छ- उनीहरूले छोराछोरीसँग यौनका बारेमा कुरा गरेको ठान्छन् । तर, छोरीछोरीले यसबारे केही बुझ्दैनन्,’ न्युयोर्कको मोर्गन स्ट्यान्ली चिल्डे्रन्स हस्पिटलका डा. केरेन सोरेन भन्छिन्, ‘यौनका कुरा गर्दा अप्ठ्यारो महसुस गर्ने भएकाले अधिकांशजस्तो अभिभावक अस्पष्ट तरिकाले छोराछोरीसँग यसबारेमा कुरा गर्छन् । तर, छोराछोरीले भने अभिभावकले यौनका बारेमा भनेको केही बुझ्दैनन् ।’ छोराछोरीसँग यौनका बारेमा कुरा गर्न अप्ठ्यारो हुने सोरेन स्विकार्छिन् । उनका तीन किशोरकिशोरी सन्तान छन् । ‘यौनका बारेमा कुरा गर्दा छोराछोरीले तपाईंलाई मूर्ख कुरा गरेको ठान्छन्,’ आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘तर, छोरछोरीसँग यौनका बारेमा कुरा गर्नु अत्यन्त जरुरी र महत्त्वपूर्ण छ । यसले आफ्ना सन्तानलाई यौनका बारेमा जागरुक बनाउँछ । उनीहरूले यौनजन्य रोगबाट सुरक्षित हुन्छन् । किशोरावस्थामै गर्भवती हुने जोखिम घट्छ ।’ यस अनुसन्धानले अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीसँग यौनका बारेमा छिट्टै छलफल गर्नुपर्ने सल्लाह दिएको छ । अभिभावकले एकैपटकमा सबै कुरा भन्नुपर्छ भन्ने होइन । अभिभावकले एकपटकमा सबै कुरा भन्नुभन्दा बिस्तारै-बिस्तारै यौनका बारेमा भन्नुपर्ने सल्लाह अनुसन्धानकर्ताको छ । आमाबाबुले छोराछोरीको उमेरअनुसार सानैदेखि यौनका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् । बच्चाको उमेर बढ्दै जाँदा यस विषयलाई थप गहन बनाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । ‘१२ वर्षको बच्चाले यौनलाई हेर्ने दृष्टिकोण १५ वा १८ वर्षका किशोरकिशोरीको भन्दा अत्यन्त भिन्न हुन्छ,’ सोरेन भन्छिन्, ‘१० देखि १३ वर्षका बच्चालाई यौन विषय घीनलाग्दो लाग्छ । त्यसैले उनीहरूलाई गर्भनिरोधकका विभिन्न तरिकाका बारेमा सम्झाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।’ त्यसैले उमेर र बच्चाको जिज्ञासाअनुसार यौनका बारेमा छलफल गर्दै जानुपर्छ । यौन विषयमा छोराछोरीसँग छलफल गर्न मिल्ने अवस्थाको सधैँ सदुपयोग गर्न पनि विज्ञ सल्लाह दिन्छन् । जस्तै, टेलिभिजनमा यौनका कार्यक्रम हेर्दा, स्कुलमा यौन शिक्षाका बारेमा पढाउँदा वा चिकित्सकको जाँदाको अवसरलाई प्रयोग गरेर यौनका बारेमा छोराछोरीलाई भन्नुपर्ने डा.मार्क बताउँछन् । ‘छोराछोरीसँग यौनका बारेमा छलफल सुरु गर्न अप्ठ्यारो लाग्ने पहिलो चरण पार गरेपछि यसबारे छलफल गर्न सजिलो हुन्छ,’ मार्क भन्छन्, ‘त्यसैले यस सम्बन्धमा कुरा सुरु गर्ने प्रत्येक मौका प्रयोग गर्नुस् । सुरुसुरुमा हुने असहजपन बिस्तारै हटाउँदै जानुस् । आफ्ना सन्तानको उज्ज्वल भविष्यका लागि यौन शिक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।’ -एजेन्सीको सहयोगमा source: nayapatrika
« •एचआईभी जोखिम:सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ “एक्सपोज” गर्न आपत्ति छैन यिनलाई »